Nagu saabsan - GRX DARYEELKA (HONG KONG) CO., LTD.
Hoyga > Nagu saabsan
GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD.hoos yimaada Shenzhen GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD., Dongguan DARYEELKA GRX (HONG KONG) CO., LTD., Dongguan Minxiang Hardware caaga Co., Ltd. inta badan waxay ku hawlan tahay horumarinta iyo soo saarida maqaarka yg jiinyeer tuugada, dogobyo kala duwan oo zinc ah, madax si toos ah u jiidaya. Jiinyeerrada birta ah, jiinyeerrada caagga ka sameysan, jiinyeerrada nayloon, jiinyeerrada aan la arki karin iyo jiinyeerrada kale ee gaarka ah, iyo sidoo kale badhamada isku dhafan ee kala geddisan, qabatooyin, suumanka suunka, kabaha lagu xidho. Boorsooyinka gacanta, shandadaha iyo waxyaabaha dharka ka kooban sida calaamadaha ganacsiga. Ka dib sannado badan oo dadaal aan kala go 'lahayn iyo horumarin, hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda iyo tayada wax soo saarka ayaa la gelinayaa meesha ugu horeysa
Shirkaddu hadda waxay leedahay in ka badan 80 milyan oo mitir murabac oo aqoon isweydaarsiyo ah, 800 oo shaqaale ah, tiro badan oo ka mid ah shaqaalaha hormarinta tikniyoolajiyadda horumarsan ee gudaha iyo dibedda, iyo nidaam maamul oo isku dhafan wax soo saar, hawlgal, iib iyo adeeg. Baaxadda codsiga ee alaabteenna waxaa ka mid ah dharka, shandadaha, warshadda kabaha, warshad jiinyeer.
Jiinyeerrada iyo alaabada kale ee qalabka ay soo saarto shirkadeenu waxay dhaafeen IS09001: 2000 nidaamka maaraynta tayada.
80 mashiinada tuurista dhinta, 200 mashiinada wax lagu shiro, 200 makiinado feer, 150 mashiin oo fiilooyin ah, 20 makiinado wax lagu duro oo la isku duro.
Alaabada waxaa loo dhoofiyaa dhamaan qeybaha kala duwan ee dalka iyo Hong Kong, Macao, Taiwan, Europe, America, Southeast Asia iyo wadamo kale. Tayada wanaagsan iyo adeegga iibka kadib waxay ku guuleysteen kalsoonida iyo ammaanta macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. Ku soo dhawow macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah dal iyo dibadba inay na soo booqdaan, waxaan ku siin doonaa adeegga ugu tayada wanaagsan.
Lambarka 1, Wadada Changshi, Shijie Village, Yantian, Fenggang Town, Dongguan City, Gobolka Guangdong
Xuquuqda 2020-2021 Guo Ruixiang Dharka (Hong Kong) Co., Ltd.